रनपा वडा नं. ६ अध्यक्ष दाहाल भन्छन् : सौराहालाई विश्वकै नमुना पर्यटनमैत्री वडा बनाउछु (भिडियोसहित) – Saurahaonline.com
रनपा वडा नं. ६ अध्यक्ष दाहाल भन्छन् : सौराहालाई विश्वकै नमुना पर्यटनमैत्री वडा बनाउछु (भिडियोसहित)
चितवन, ६ जेठ । चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहा अन्तर्गत पर्ने वडा नं. ६ को वडा अध्यक्षमा नेपाली काग्रेसका बलराम दाहाल सहितको प्यानल नै विजयी भएको छ ।
दाहालले १ सय २४ अन्तरका साथ विजयी भएका हुन् । भने उनले ७ सय ४९ मत पाएका थिए भने उनका किटतम प्रतिद्धन्द्धी एमालेका रामजी चौधरीले ६ सय २५ मत पाएका थिए ।
रेवान सौराहाका संस्थापक अध्यक्ष रहेका दाहाल वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएसगैँ वडा ६ पर्ने विश्वकै नमुना पर्यटनमैत्री वडा बनाउने बताए ।
सौराहा अनलाईनसगँ कुराकानी गर्दै सौराहाले आज नेपाल चिनाएको छ अब मैले विश्वकै नमुना पर्यटनमैत्री वडा बनाउने योजना छ । साथै उनले सौराहामा ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ बनाएर राप्ती या निकास कटाउने ठाउँमा बगाउने काम गर्ने बताए । साथै रत्ननगर नगरपालिका र बाघमारा सामुदायिक वनसँग समन्वय गरी विकास तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम सम्पन्न गर्ने अठोट समेत व्यक्त गरे ।
रत्ननगरको वडा नं ६ मा पर्ने यस वडाले सौराहा, बछौली र दोरङ्गी क्षेत्रमा अब थप विकासे योजनालाई उच्च प्रथामिकता राख्ने उनको विशेष योजना रहेको सौराहा अनलाईनसगँ बताए ।
यस्तो छ थप योजना
सुन्दर पर्यटकीय नगरीका रुपमा विकास गर्न चारैतिर हरियाली, सडकको मर्मत÷सुधार, स्तरोन्नतिलगायत ढल निकासका काम गरी पर्यटनमैत्री वडा बनाउने मेरो योजना छ । उज्यालो सौराहाको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै सोलारबत्ती जडान गरी झिलिमिली बनाउने योजना छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गराउन यहाँको आदिवासी थारु समुदायको परम्परागत संस्कृति झल्काउने छाप्रा तयार गर्ने र वृद्धवृद्धाहरुलाई आयआर्जन बढाउने काम गर्ने छु ।
पर्यटकहरुलाई विभिन्न हस्तकलाका सामग्री तयार पार्दै गरेको देखाउन सके अझै पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
त्यसले वृद्धवृद्धा आमाबुबालाई समय कटाउन र आफ्ना दौँतरीसँग भेटघाट गर्ने अवसर पनि जुराउँछ । आयआर्जन पनि हुन्छ । अहिले वृद्धवृद्धालाई आश्रममा लगेर राख्ने प्रवृत्ति पनि छ । त्यसलाई हटाउन पनि यस्ता कामले सकारात्मक सन्देश बाहिर जाने देखेको छु । यस्तै, सामुदायिक रुपमा थारु रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरी पर्यटकलाई परम्परागत खानाका परिकार उपलब्ध गराउने योजना पनि छ ।
यि हुन् सौराहाका बलराम
पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–६ स्थित सौराहाका ४९ वर्षीय बलराम दाहाल सो क्षेत्रका विश्वासिला र स्थानीय जनताका भरोसाका केन्द्र मानिन्छन् । विकासप्रेमी र जुझारु कार्यकर्ता भएकैले उनलाई नेपाली कांग्रेसले वडा नं ६ बाट सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाएको छ ।
०४३ सालदेखि कांग्रेस राजनीतिमा क्रियाशील उनी ०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा सोही स्थानमा वडा सदस्यमा विजयी बनेका थिए । बालकुमारी कलेज, नारायणगढबाट नेविसंघ सचिवको जिम्मेवारी पूरा गरेका दाहाल पछिलो समय कांग्रेसको कुनै पनि जिम्मेवार र नेतृत्वदायी भूमिकामा छैनन् ।
तथापि विभिन्न संघसंस्थामा रहेर उनले निर्वाह गरेको भूमिकाले उनी सर्व्प्रिय र जनअपेक्षा पूरा गर्ने अभियन्ताका रुपमा परिचित छन् ।
रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोसिएसन (रेवान)का संस्थापक अध्यक्ष एवम् युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाको अध्यक्ष रहेर जिम्मेवारी निभाइसकेका उनी पेसाले रेष्टुरेन्ट व्यवसायी हुन् ।
स्वच्छ र साझा व्यक्तित्वको छवि बोकेका उनी स्थानीय निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमतले विजयी हुनेमा विश्वस्त छन् ।